Xaaladda Naxdinta leh ee Warshadda looxa | Shiinaha Case Shockless for Tablet-saareyaasha, Shirkado
Anti-fall Shockproof case for Samsung galaxy tab A7 lite 8.7 2021 oo leh garabka garabka
Dhignaashada Dacwada si gaar ah loo qorsheeyay KALIYA oo la jaan qaada Samsung Galaxy Tab A7 lite 8.7 inch 2021Moodel: SM-T220 / T225) MA haboona Samsung Tab A7 10.4 inch 2020 sii deynta (Model: SM-T500 / T505) kiniin. ama kiniin kale oo nooc ah. Fadlan hubi nambarka nambarka iyo booska kaamirada kahor iibsiga. Gacmahaaga ku xoree Suunka garbaha ee muuqda, waa naqshad gaar ah oo loogu talagalay carruurta socotada / safarka, naqshadayaasha naqshadaha, wakiilada guryaha, shaqaalaha dhismaha iyo sidoo kale shaqada banaanka ...
Kiis Naxdin leh oo leh Hufnaan Daahsoon oo Loogu Talagalay iPad Air 4 10.9 inch 2020 Release
Si gaar ah loogu talagalay iPad Air 4aad Generation 10.9 Inch 2020 (Nambarka Qaabka: A2072 / A2316 / A2324 / A2325). Aan ku habboonayn aalado kale. Codso dusha maqaarka PU ee waara, iyo jilicsanaanta jilitaanka TPU leh geesaha la xoojiyay iyo dhabarka cad. Acrylic Hard shell back back with a dabacsan TPU bumper wuxuu ka ilaaliyaa iPad-ka faraha, naxdinta, dhibcaha shilalka iyo saamaynta. Jilicsan microfiber-ka gudaha ee gudaha ayaa ka ilaaliya kiniinkaaga xoqan. Daboolka dambe ee dhabarka ayaa si sharaf leh u muujin doona ...
360 wareega kiis culus culus Shockproof Rugged Case for ipad for Samsung for Lenovo tablet
SHAQAALAHA IILAALINTA AWOOD LEH Kiisku wuxuu leeyahay dhisme saddex-lakab ah: qolof adag oo polycarbonate ah, qolof silikoon ah oo jilicsan iyo jir hore, Waxay ka ilaalinaysaa aaladdaada xoqitaanka iyo kuuskuusyada iyagoo aan ku darin wax badan. 360 DEGREES ROTATABLE HAND-STRAP oo la hagaajin karo Suunka gacanta lagu hagaajin karo ayaa ku habboon ardayda, takhtarka, macallimiinta ama qof kasta oo kale oo u baahan hal gacan oo shaqo ama waxbarasho ah. Hadday tahay ilmo ama qof weyn, waxaad hagaajin kartaa cidhiidhiga suunka si dadka isticmaala ay ugu raaxaystaan ​​m ...
Slim Shockproof Rugged Case for ipad loogu talagalay Samsung ee kiniiniga Lenovo
SHAQO BADBAADO BADAN Kiisku wuxuu ka kooban yahay lakab silikoon ah oo jilicsan oo gudaha ah si looga ilaaliyo naxdinta iyo dhibcaha, iyo lakab adag oo adag oo adag oo PC ah oo loogu talagalay xoojinta iyo qeexidda Goynta saxda ah Goynta daloolka saxda ah waxay u oggolaaneysaa marin u fududaanta dhammaan badhamada, kontaroolada & dekedda iyada oo aan laga saarin kiiska. Dhamaan saldhigyada, dekedaha iyo badhannada waa la heli karaa iyadoon dacwadda laga saarin. KICKSTAND Iyada oo la dhisay naqshad taagan oo kuu oggolaaneysa inaad sameyso wicitaanno fiidiyoow ah oo gacmo-la'aan ah, aqriso, ama daawato filimada meel kasta ...